बी.पी. कोइरालालाई कुनै अन्धाको हात्ती जस्तो नबनाउँ - हिमाल दैनिक
बी.पी. कोइरालालाई कुनै अन्धाको हात्ती जस्तो नबनाउँ
अतिशय वामपन्थी र अतिशय दक्षिणपन्थीले पनि बी.पी.को नाउँ लिएकाे इतिहासमा पहिलाे पटक हाेइन
२५ भाद्र २०७५, सोमबार १८:०६
भक्तपुर कांग्रेस जिल्ला सभापति दुर्लभ थापाले बोल्ने क्रममा अर्को थापाको नाम लिनुभयोः कमल थापा। दुर्लभ थापाले भन्नु भयोः आज कमल थापा पनि बी.पी. कोइरालाको नाम लिँदैछन्। दुर्लभले कमलको नाम लिने कुराको शिलशिलामा एउटा शेर याद आयो। इधर तू है, उधर तु है, अगल यह बीचमै क्या है? महज एक नाम है वो भि कहिँ धोेका न होेजाए।
महापुरुषहरुको अन्तिममा नाम मात्रै बाँकी रहन्छ। सबैले बी.पी. कोइराला, बी. पी. कोइराला, गान्धी, गान्धी, माओ, लेनिन भन्छन् तर, अन्त्यमा बी.पीको नाउँमा पनि धोका भएको छ, पुष्पलाल, लेनिन र माओको नाउँमा पनि धोका भएको छ। यस अवस्थामा दुर्लभ थापाले चिन्ता गर्न पर्दैन। आफूँ बाहेक कुनै थापाको माया नगरे हुन्छ। उनीहरु अन्त्यमा वेनकाब भएर जान्छन्।
मलाई नेपाली कांग्रेसको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका संयोजक विमलेन्द्र निधिले बी.पी.का बारेमा आज तपाईले बोल्नु पर्यो भन्दा मैले धेरै कुरा सोचेँ। यहाँ रामचन्द्रजी, गोपालमानजी हुनुहुन्छ, म छु। उमेरका कारणले अरु साथीहरुको तुलनामा हामी अलि पुरानै भयौँ।
बी.पी.का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यीक अथवा राजनीतिक विषयमध्ये कुन कुरालाई जोड दिएर बोल्ने भन्ने कुराको विचार गर्दा मलाई एकाएक लाग्यो कि, समय बलबान हुन्छ। समयले धेरै कुरा गर्छ र गराउँदछ।
बी.पी. कोइरालाको राजनीतिक व्यक्तित्व हेर्नुभयो भने, उहाँले सर्वप्रथम २००४ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनाको लगत्तै युगवाणीमा एउटा लेख लेख्नु भएको छ। लेख थियो ‘हाम्रो ध्येय’ अर्थात त्यतिबेलाको समयमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको ध्येय। त्यस लेखमा उहाँले लेख्नु भएको थियोः हामी अहिंसावादी हौँ। हामी समन्वयवादी हौँ। हामी मिलिजुली जान चाहन्छौँ। हामीले गान्धीबाट सिकेका छौँ। के सिकेका छौँ भन्दा श्री ५ श्री ५ कै ठाउँमा रहने, श्री ३ श्री ३ कै ठाउँमा रहने तर, जनताबाट छानिएको प्रतिनिधि सभालाई प्रशासनको काम सुम्पिने।
हामीलाई श्री ५ महाराजधिराजले भत्ता खाएकोमा, उपाधि धारण गरेकोमा केहि आपत्ति छैन। श्री ३ पनि थान्कोमा बसे हुन्छ। तर, दैनिक शासन प्रशासनको अधिकार भने जनतालाई नै दिनु पर्छ। जनउत्तरदायी शासनमा मात्रै प्रजातन्त्र सफल हुन्छ। तर, त्यसको ३ वर्ष नबित्दै उहाँले सशस्त्र क्रान्तीको नेतृत्व गर्नु भयो। सशस्त्र क्रान्तीको नेतृत्व पनि कुन बेलामा गर्नु भयो भने, जतिबेला नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला हुनु हुन्थ्यो। नातामा उहाँ बी.पी.का दाजु हुनु हुन्थ्यो तर, उहाँ गान्धीवादी हुनुहुन्थ्यो। साबरमती आश्रममा उहाँको शिक्षा दिक्षा भएको थियो। मातृकाबाबुलाई सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न पार्टी सभापति बनाइएको थियो। नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबीचको एकीकरणका क्रममा समन्वयकारी भूमिकामा मातृकाबाबु हुनुहुन्थ्यो।
सुवर्णजीका संस्मरणमा पनि पढ्न पाइन्छ र अरुले पनि यो कुरा लेखेका छन्। सुवर्णजीले बी.पी.लाई भन्नुभयोः बी.पी मैले राणालाई चिनेको छु। मेरा दाजुभाइलाई चिनेको छु। यो अहिंश्रक आन्दोलन गरेर मोहन शम्शेर मान्नेवाला छैनन्। हिंश्रक आन्दोलनको तयारी गर्नु पर्छ। उता सभापति, तपाइका दाजु गान्धीवादी मातृका यो हुँदै हुँदैन भन्नु हुन्छ। बी.पी.ले त्यस्तो अवस्थामा भित्रभित्रै सशस्त्र संघर्षको तयारी गर्नु भयो। अन्त्यमा तत्कालिन परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले सफलता प्राप्त गर्यो।
अहिंश्रकको संघर्ष गर्नु पर्छ भनेर युगवाणीमा लेख लेख्ने बी.पी कोइराला, अहिंसक संर्घष गर्छु भनेर राणाशाहीमा नेपाल आएर मोहन शम्शेरलाई भेट्न खोज्ने, जसले पहिलो पटक विराटनगर जुटमिलमा सत्याग्रह गर्ने जतिबेला पद्मशम्शेर श्री ३ थिए, दोस्रो पटक मोहन शम्शेरको पालामा खतरा छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै किसुनजी र उहाँ आउनु भएको थियो। उहाँले चिठी लेख्नु भएको छ र त्यो प्रकासित भएको पनि छ। त्यसमा उहाँले लेख्नु भएका छ कि, म श्री ३ महाराज मोहन शम्शेरलाई भेट्न आउँदा सुरक्षित छैन। म उहाँलाई भेटेर भन्न चाहन्छु कि थोरै अधिकार दिए पुग्छ। तर, उहाँ थुनामा पर्नु भयो, अनसन बस्नु भयो र झण्डै झण्डै ज्यान गएको अवस्था थियो। अन्त्यमा उहाँ छुटेर गएपछि सशस्त्र क्रान्तिको तयारी गर्नु भयो।
पछि उहाँ गृहमन्त्री हुनु भयो। २००८ सालमा सत्ताबाट बाहिरिएपछि नेपाली कांग्रेस झण्डै ८ वर्षका लागि बाहिर रह्यो। त्यो बीचमा सत्यग्रह भएनकी, जुलुस भएनकी, विद्रोह भएन? सबै कुराहरु भए। अन्त्यमा २०१५ सालको आम चुनाव भयो र कांग्रेसले अभूतपूर्व सफलता प्राप्त गर्यो। र बी.पी. प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ ग्रहण गर्नु भयोे। प्रधानमन्त्री भएर उहाँको कार्यकाल धेरैै दृष्टिले सफल रह्यो।
सबैभन्दा ज्यादा मन्त्रिमण्डलमा आफैले मितव्ययीताको उदाहरण पेश गरेर पहिले स्वयं आफ्नो तलब घटाउने निर्णय गर्नु भयो। यो सुन्दा सानो कुरा लाग्न सक्छ तर, हाम्रो सरकार वा हाम्रो पार्टीका नेताले यो प्रतिकात्मक कुरा जुन पाँच सय तलब घटाएर खासै ठूलो फरक पर्ने थिएन तर, देश बनाउने योजना लिएको प्रधानमन्त्रीले म एक हजार रुपैया छोड्छु भन्दा अनिमात्र किसानलाई भन्न सक्नु हुन्छ तपाई १० रुपैयाँ छोड्नुहोस्। आफू केहि पनि नछोड्ने र जनतालाई मात्रै छोेड भन्ने? यो चल्दैन भनि बी.पी.ले देखाएर भन्नु भयो कि म स्वयं आफ्नो तलब र आम्दानीमा कटौती गरिदिन्छु। त्यतिभएपछि जनतालाई भन्ने हक लाग्छ। अन्यथा अरुलाई भन्ने नैतिक अधिकार हुँदैन।
अहिले यद्यपि यो व्यक्तिगत प्रसंग जस्तो होला, वर्तमान प्रधानमन्त्रीको उपचारमा मात्र करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको समाचार बाहिर आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीको उपचारमा राज्यको करोडौँ रुपैयाँ खर्च भयो भने जनताले तपाईसँग माग्दा दिन्न कसरी भन्ने? हो नेपाली जनताको अवस्था के छ भने उपचार गर्नु पर्यो भने आफ्नो घरमा भएको खसी, बाख्रा, खेत बेचेर उपचार गर्नु पर्दछ।
बी.पी.ले यी कुरा बुझेपनि उनको सरकार १७ महिना पनि टिकेन। बी.पी. जेल पर्नु भयो, जेलमा पनि उहाले अनसन बस्नु पर्यो। उता सुवर्णजीको नेतृत्वमा सशस्त्र विद्रोह भयो। उहाँको नेतृत्वमा सशस्त्र विद्रोह हुँदा यो नबिर्सिउँ कि दुर्गानन्दा झाले राजा महेन्द्रमाथि बम प्रहार गरेका थिए। दुर्गानन्द झाको गतिविधिलाई पार्टीको इतिहासमा कसरी हेरिन्छ र लेखिन्छ म भन्न सक्दिन। तर, दुर्गानन्द झाले नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ताकोे रुपमा त्यो काम गरेका थिए भन्ने कुरा विर्सनु हुँदैन।
आज बी.पी.ले राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्नु भएको थियो भनि दुर्लभ थापाकै थर भएका केहि व्यक्तिहरुले भन्छन भने हामीले उनीहरुलाई सम्झाउन सक्नु पर्दछ। हाम्रो पार्टीले समयचक्र वा संघर्षको हरेक स्वरुप स्वीकार गरेको छ।
तपाईहरुलाई थाहा छ, बी.पी बाहिर जानु भयो र झण्डै एक वर्ष उहाँले प्रतिक्षा गर्नु भयो। सुवर्ण शम्शेरले राजा महेन्द्रलाई संवैधानिक निकासको आशा राखेर भक्तिपूर्ण सहयोगको प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। तर, राजा महेन्द्रले त्यो स्वीकार गरेनन्। त्यसपछि बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा ओखलढुंगा काण्ड भयो।
ओखलढुंगा काण्ड हुँदा कतिपय आतकंवादी कार्य पनि भए। तपाई हामीले सुनेका र जानका केशव कोइराला, लिलानाथ दाहाल, ठगी दाहाल, गोकर्ण विष्टदेखि राम र लक्ष्मण जो नेबिसंघका उपसभापति थिए, उनीहरु सबै उक्त काण्डमा शहिद भए। त्यो बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा गरिएको काण्ड थियो।
पछि धेरै कारणले भारत सरकारको रवैया देखेर बी.पी.का समकक्षी साथीहरु जयप्रकाश नारायण, चन्द्रशेखर जस्ता नेतालाई इन्दिरा गान्धीले जेलमा हालेको देखेर, भारतमा कानुनको शासन समेत समाप्त भएको देखेर, भारत र सोभियत युनियन दक्षिण एशियामा महत्वाकांक्षी भएको देखेर बी.पी. कोइराला मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किनु भयो। राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर फर्किदा कहिल्यै पनि कुनै पनि किसिमले उहाँले प्रजातान्त्रिक जीवन मूल्यसँग सम्झौता गर्नु भएन।
आज ‘महर्षि वो नाम हैँ जो कहि धोका हो नजाए’ भनेजस्तै विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरु राप्रपादेखि माओवादी नेता समेतले म पो सच्चा बी.पी.को उत्तराधिकारी हुँ भन्न थालेका छन्। ओहो हतियारबन्द क्रान्ति हामीले मात्र गरेका हौँ र कांग्रेसले पनि गर्यो भनेर एक पटक कुनै वक्तव्यमा अध्यक्ष प्रचण्डजीले भन्नु भएको थियो। एमालेका नेताहरुले पनि भन्नु भएको छ। हामीले पनि बन्दुक उठाएका थियौँ। सुन्दरीजलमा बी.पी.को स्मारकस्थलमा गएर ओेहो म पो बी.पी.को उत्तराधिकारी हुँ भने। अतिशय वामपन्थीले पनि बी.पींको नाउँ लिए, अतिशय दक्षिणपन्थीले पनि बी.पी.को नाउँ लिए।
बी.पी.ले त राजासँग घाँटी जोडाउने कुरा गर्नु भएको थियो, त्यसैले उहाँको उत्तराधिकारी मै हुँ भनेर एउटा थापाले भन्ने, होइन बी.पी.ले त हतियार उठाएर राजनीति गर्नु भएको थियो त्यसैले उहाँको वास्तविक उत्तराधिकारी मै हुँ भनेर अर्को थापाले भन्ने (यहाँ थापा थर थपिदिएँ) यो इतिहासमा पहिलो पटक भएको होइन।
यो अन्धाले हात्ती छामेर हात्तीकोबारेमा आफ्नो अनुभवमा हात्ती कस्तो भनेजस्तै हो। समग्रमा बी.पी. कोइरालालाई हेर्ने अध्यायको प्रारम्भ आज नेपाली कांग्रेसले गर्नु पर्छ।
नेपाली कांग्रेस र नेपालको पुर्नउत्थानका लागि र बढ्दै गएको अधिनायकवादी अराजक प्रवृत्तिका लागि अत्यन्त आवश्यक भएको छ।
समग्रमा बी.पी.को व्यक्तित्वलाई कसरी हेर्ने र विचारलाई कसरी हेर्न भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
माक्र्सवादको सिद्धान्त के हो भन्यो भने यसले भौतिकवादमा विश्वास गर्छ। माक्र्संवादले वर्ग संघर्षमा विश्वास गर्छ। माकर्सवादले मजदूर वर्गको तानाशाहीमा विश्वास गर्छ। माक्र्सवादले मजदूर वर्गको तानाशाहीको प्रतिनिधित्व गर्न पार्टीको तानाशाहमा विश्वास गर्छ। तर, समानताका सिद्धान्त के हुन? स्वतन्त्रताका सिद्धान्त के हुन, लोकतन्त्रका सिद्धान्त के हुन? यी कुनैपनि कुरा एक दिनमा घटेका एउटै घटना होइनन्। आज फलानो मुलुक स्वतन्त्र भयो भन्ने हुँदैन। स्वतन्त्रता हुँदै जाने, गर्दै जाने र विकसित हुँदै जाने प्रक्रिया हो।
सात सालको क्रान्तिमा बी.पी. कोइरालाले जे गर्नु भयो त्यतिबेलाकै स्वतन्त्रताका लागि गर्नु भयो। राजासँग सम्झौता गरेर एउटा संविधान दिन गरियो। अन्तरिम संविधान लिएर भनियो कि ढिलो चाँडो नेपालमा संविधानसभाको चुनाव हुन्छ।
तर, त्यतिबेला नेपाल पूर्ण स्वतन्त्र भएको थिएन। आज पनि नेपाल पूर्ण स्वतन्त्र भएको छैन। आज सबै नेपालीको गास, वास र कपासको समस्याको समाधान हुने, सबै स्वतन्त्रतापूर्वक बोलन पाउने भयबाट नडराउने, विभेदबाट नडराउने नेपाल जबसम्म बन्दैन। त्यसैले स्वतन्त्रता एक अत्यन्त लामो यात्रा हो।
प्रजातन्त्र एउटा अत्यन्त लामो यात्रा हो। यो कुनै रुग्ण सिद्धान्त होइन। स्वतन्त्रबाट स्वतन्त्रतर हुँदै जाने प्रक्रिया हो। त्यसक्रममा हामीले बी.पीको लामो जीवन हेर्यौँ भने झण्डै ४० वर्षको राजनीतिक जीवन नेपालमा बित्यो। त्यो भन्दा पहिले हिन्दुस्तानमा केहि वर्ष कार्यरत हुनु हुन्थ्यो। हिन्दुस्तानको समयसहित झण्डै ५० वर्षको सक्रिय जीवन देखिन्छ। त्यो सक्रिय जीवनमा उहाँले अनेकन किसिमका जीत र हार हाँसिल गर्नु भयो। यी सबै जीत या हारको एउटै लक्ष्य थियो नेपाली जनतालाई अथवा मानव जातिलाई मात्र बडिभन्दा बडि संमृद्ध र स्वतन्त्र कसरी बनाउने?
कुनै पुच्छर पक्रेर सात सालमा बी.पीले अनसन गर्नु भएको थियो त्यसैले अनसन नै प्रजातन्त्र हो, सात सालमा हतियार बन्द क्रान्ति गर्नु भएको थियो त्यसैले हतियार बन्द क्रान्ति नै प्रजातन्त्र हो। बी.पी.का पालामा कम्युनिष्टसँग एकता भएको थिएन त्यसैले कम्युनिष्टसँग एकता गर्नु बी.पी. विरोधी हो। बी.पी.का पालामा आरक्षण थिएन आरक्षण गर्ने कांग्रेस बी.पी. विरोधी हुन्। यो धर्म निरपेक्षता यिनीहरुले गरे तर, बी.पी भएको भए गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने जुन प्रश्नहरु आइरहेका छन् त्यी सानै स्वरमा भएपनि हामीभित्रै पनि उठेका छन्। बाहिर अलि ठूलो स्वरमा उठिरहेको छ। त्यसले बी.पी.वा भट्टराइको मात्र अर्थ नबुझेको होइन त्यसले सबैभन्दा ज्यादा प्रजातन्त्रको अर्थ बुझेको छैन।
Prevपछिल्लोहिमाली क्षेत्रहरुबीच बहुआयामिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु नेपाल र चीनको साझा लक्ष्य: सभामुख महरा
अघिल्लोसुन तस्करीका अभियुक्त सार्वजनिकNext